के म क्याडेस्ट्रेका लागि गुगल अर्थ छविहरू प्रयोग गर्न सक्छु? - Geofumadas
जुलाई, 2013 cadastre, गुगल अर्थ / नक्सा, आराम / प्रेरणा
आज डच मित्रको साथ राम्रो हास्यको पछाडि, मैले प्रक्रियाको बीच केही समानतालाई बचाएको छु जुन क्लिनिकल मनोविज्ञानमा क्यान्सरको नेतृत्व गर्दछ र Google धरती रोमान्स गलत अन्त्यमा छन्:
चरण १: डराउनुहोस्।
एक प्राविधिक क्षेत्र बेच्न चाहने मालिकबाट मापन अनुरोधको प्रतिक्रियामा खेतमा जान्छ; जाँच गर्नुहोस् कि त्यहाँ नयाँ भवनहरू छन् जुन क्याडस्ट्रल नक्शामा दृश्यात्मक छैन। त्यसपछि ऊ अफिसमा आउँछ र हेर्छ कि years० बर्ष पहिलेको ओर्थोफोटोले त्यस परिधिमा दाखबारीहरू मात्र देखाउँदछ, जसमा देहातपूर्ण अवस्थाहरूमा ठूलो षड्यन्त्र रहेको हुन्छ।
२ techn बर्षदेखि त्यहाँ रहेको टेक्नीशियनलाई कल गर्नुहोस्, घाँटीमा स्टेरियोस्कोप झुण्डिएको बुढो हुँदै जानुभयो र लगाएको लेरोइ अब केवल चिठी अक्षरहरू मात्र बनाउँदछ; अर्कोको शीर्षमा एक तह सुपरइम्पोज गर्न संघर्ष गरेपछि, तिनीहरूले पहिचान गर्दछन् कि वास्तवमा नक्सामा छविमा के हुन्छ।
त्यसैले तिनीहरू पछिल्लो वर्षको नवीनतामा सहज गर्ने निर्णय गर्छन्; गुगल अर्थ वर्ष 2004 आइपुग्यो र एक रंगीन अन्थोटोटो देखाउछ जहाँ हालका भवनहरू देखा पर्छन्।
त्यसोभए डराउँदछ: त्यो प्लटको निर्देशा the्कहरू नक्साको साथ मेल खाँदैन, ती २० मिटरभन्दा पुराना छन्।
-सावधान हुनुहोस्-। यसले तपाईंलाई क्वाटरनरी भन्छ। -ती समन्वयहरू पुर्खा एलियन्सहरूद्वारा बनाइएका थिए, र केवल तिनीहरूले तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्.
सचेत कि गुगल त्यो गलत हुन सक्दैन, यसले छविलाई मिलाउन सम्पूर्ण क्याडस्ट्रल तह सार्दछ। त्यसोभए उनले आफ्नो वरिष्ठलाई बोलाउँदछन् र डिजिटल टेरेन मोडेल देखाउँदै प्रभावित हुन्छन् जुन उसले गुगल अर्थमा निर्यात गरेको क्याडस्ट्रल तहसँग मेल खान्छ।
समाचार रोमाञ्चित, ejidos को आज्ञा को टाउको राम्रो मूल्य मा सबै बासिन्दा बेच्न "Google धरती संग साइटहरु मिल्ने को प्रमाणपत्र" प्रत्येक सम्पत्ति लागि योजना, जारी गर्न आग्रह ... र अब WGS84! ... एसईओ अनुकूलित!
चरण २: अस्वीकार
दुई वर्ष पछि Google ले एउटा छविको साथ देखिन्छ जुन 2006 भन्छन्; तकनीशियन मानिन्छ कि यो तस्बिर हालैको छ, यो भवनको स्थान लगभग6मिटर दक्षिण पूर्वमा विस्थापित भएको छ जुन उनी बहुभुज, अब हरीमा सारियो।
तपाईलाई अचम्म लाग्छ कि अब तपाईले छाप्नु भएको नक्शाको निर्देशांकहरु कि त मौलिक नक्शा वा नयाँ गुगल छविसँग सही छैन। त्यसबेलासम्म हातले खिचेका नक्शा बाथरूममा छोडिए जुन क्वाटरनरी निकालिएको दिनदेखि नै एउटा गोदाम भयो।
तपाईंको डर अस्वीकारमा परिणत हुन्छ, किनकि तपाईं स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न कि गुगल गलत छ; यस पटक होइन। त्यसकारण यसले सम्पत्तीलाई प्रश्नमा छोडिन्छ र सम्पूर्ण शहर जहाँ यसलाई सारियो; समस्या आफै समाधान गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्दै।
यद्यपि, यसले नयाँ नियन्त्रणाहरूमा आधारित6मिटरमा गोल अफसेटको साथ नयाँ प्रमाणपत्र जारी गर्न निर्णय गर्दछ।
तीन वर्षपछि Google ले 2009 को एक नयाँ छविको साथ देखा पर्दछ र तपाईले देख्न सक्नु हुन्छ, विवरण धेरै स्पष्ट छ।
ध्यान दिनुहोस् कि इमारतले व्याख्या गरेको तरिका थिएन।
यो पछिल्लो वर्षको स्थानसँग सम्बद्ध हुन्छ, यसैले यो स्वीकार गर्दछ कि यसको भू-भागहरू6मिटरहरू विस्थापित छन् ... त्यसैले यो अन्य विस्थापनका लागि विस्थापनको साथ निर्णय गर्न निर्णय गर्दछ, यद्यपि यो गोल बिना।
यो आश्चर्यजनक छ कि तस्वीरमा प्लास्टको सामने निर्माण गरिएको नयाँ इमारत छ, किनकि यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि त्यहाँ थप सटीक जानकारी हुन सक्दैन; त्यसो कि यो यसको 6.47 मिटर कार्टोग्राफी को एक XLUMX डिग्री को झुकाव कोण मा चल्छ।
क्वाटरनरी वृद्ध एक बिक्री खरीद प्रक्रियाको लागि अफिसको माध्यमबाट जान्छ र निर्देशांकहरू अनौंठो छन् कि भनेर डराउँछन्। उसले सुझावहरू दिन वा मूल खोज्न कोसिस गर्दछ तर निर्माण टाइपोलोजीको आधारमा केही थीम आकारहरू देखाए पछि छोड्छ।
उहाँले 2010 मा अर्को वर्षको प्रतीक्षा गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ, र यसको नयाँ भवन छविमा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न क्षेत्रमा जान्छ। केहि अद्भुत उपकरणहरु लाई जारी गर्ने कदम को लागी उनको प्रचार उल्लेख गर्न को लागी भुगतान नहीं गरिन्छ ... सटीक, 19 सेंटीमीटर को बिना पोस्ट प्रसंस्करण को।
GPS राख्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि निर्देशांक विस्थापित छ, अर्को परीक्षण गर्दछ १ 15 र २ minutes मिनेट र निर्देशांकले पुष्टि गर्दछ कि यो एकदम विस्थापित छ। अगाडि सम्पत्तिको नयाँ मालिकलाई लामो समयसम्म टेर्दै जीपीएसलाई लामो समयसम्म पढ्ने छोड्नुहोस्; यसले तपाईंलाई कोरेडोरमा जीपीएस हेराई गर्दै कफी खान आमन्त्रित गर्दछ जुन मिड-डे सूर्यमा लगभग minutes० मिनेटको लागि खाना बनाउँदछ।
छिमेकीले उत्तर दियो कि उनले तीन बर्ष पहिले सम्पत्ती किनेको छ, र सम्पत्ती रेजिस्ट्रीमा उनले यो दर्ता गरिसकेको छ, जसलाई अब सटीक निर्देशांकको साथ योजनाहरू आवश्यक पर्दछ। UTM WGS84… SEO अनुकूलित!
केही डर संग र पेशाब गर्न चाहानुहुन्छ, उसले सम्पत्तिको दस्तावेज सोध्दछ र यसले यो संदेहबाट निकाल्छ:
उनीहरूले सम्पत्ति प्रमाणीकरणको साथ योजना दर्ता गर्न गएका छन् कि उहाँले 2007 मा Ejidos आयोगलाई प्रदान गर्नुभएको छ; र उनीहरूले उनीहरूको आभारी रहेको बताएका छन् कि उनीहरूले अपडेट गरेका छन किनकि अब उनी निश्चित छन् कि दुई छिमेकीहरूले भनेका छन् कि उनीहरु न्यायसंगत हुने छैनन् किनभने तिनीसँग भर्खरैको योजना छ र उनीहरु 30 वर्ष भन्दा बढी छन्।
मापन लिनुहोस्, माथि, र फेरि फेरि। एक अधिक सटीक उपकरण प्राप्त गर्नुहोस्, र अन्तमा वास्तविकताको विश्वासमा समाप्त हुन्छ:
- Google को सम्पत्ति को उपायहरु 23.87 मीटर विस्थापित भएका छन्!
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो Supergo बाट3समाचारहरू
अर्को पोस्ट सिटोक्याड र टोटल स्टेशन प्रयोग गरी सर्वेक्षणको लागि AutoCAD अभ्यासअर्को »
Rep को जवाफलाई "क्याडस्ट्र्रेको लागि म गुगल अर्थ छविहरू प्रयोग गर्न सक्छु?"
एक सावधानी हुनु पर्छ जब भौगोलिक डेटा स्रोत जुन उद्देश्यको लागि डिजाइन गरिएको थिएन, विशेष गरी क्याडास्ट्रेको समर्थन गर्नका लागि, दुर्भाग्यवश Google धरतीले पोस्ट प्रोसेसिंगमा थोरै कठोर फोटोको क्लस्टर छविहरू प्रस्तुत गर्दछ, जुन छविहरू प्रस्तुत गर्दछ। विस्थापनले हामीले फरक वर्षको अर्को तुलना गर्दछौं भने।
Ciriaco Saris भन्छिन्: